घमौराले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यस्तो छ चट्टै निको पर्ने घरेलु उपाय – अभियान खबर
घमौराले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यस्तो छ चट्टै निको पर्ने घरेलु उपाय
गर्मीमा धेरेलाई घमौराले सताउँछ । अझ तरार्इबासीहरू घमाैराबाट दिक्क हुन्छन् । छाती, ढाँड र हातमा बढी घमौरा आउने गर्छ ।
जसले गर्दा पूरै शरीर नराम्रोसँग चिलाउने र चिडचिड हुने हुन्छ। कतिलाइ त ठुलाेठुलाे घमाैरा अाएर पाक्ने नै समस्या हुन्छ ।
घरमै पनि घमौराको उपचार सम्भव छः
– घमौरा भएकाले प्याज, लसुनले झानेको दाल खानु हुन्न । काँचो प्याज खानाले शरीर शीतल रहन्छ । तर, झानेको प्याजले शरीरलाई गर्मी बनाउँछ । जसले गर्दा झन् बढी घमौरा आउँछ ।
– घमौरा भएको ठाउँमा बरफ दल्दा राहत मिल्छ ।
– घमौरा आएको ठाउँमा मुलतानी माटोको लेप लगाउनाले केही दिनमै घमौरा हराउँछ ।
– बिहान–बेलुका नुहाएपछि नरिवलको तेलमा कपुर मिसाएर शरीरको मालिस गर्नाले घमौरा कम हुँदै जान्छन् ।
– घमौरा आएको ठाउँमा मेहदीको लेप लगाउँदा केही दिनमै घमौरा हराउँछ । साथै, नुहाउने बेलामा मेहदीका केही पत्ता पिसेर पानीमा मिसाउने र त्यही पानीले नुहाउँदा पनि राहत मिल्छ ।
– नीमको बोक्रा घमौरा आएको ठाउँमा दल्दा पनि राहत मिल्छ । अथवा पानीमा नीमका पात राखेर उमाल्ने र सेलाएपछि त्यही पानीले नुहाउने । यसो गर्दा पनि घमौरा घट्दै जान्छ ।
– तुलसीको डाँठलाई चन्दनजस्तै गरी घोटेर यसको लेप घमौरा आएको ठाउँमा दल्नाले राहत मिल्छ ।
– लसुनको पोटीलाई पिसेर लेप बनाई घमौरा आएको ठाउँमा दल्दा केही दिनभित्रै घमौराबाट मुक्ति मिल्छ ।
– घमौराको समस्या दोहोरि रहनेहरूले गर्मीमा चनाको सातु खाने गर्नुपर्छ । साथै कागतीपानी पनि खाइरहने गर्नुपर्छ ।
थाहा पाइ राखौं कुन विरामीको लागि आँप खान हुँदैन